ပါးစပ်ထဲက အနာအဖြူလေးတွေကဘာလို့ ပေါက်တာလဲ?? | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
ပါးစပ်ထဲက အနာအဖြူလေးတွေကဘာလို့ ပေါက်တာလဲ??
တအားကြီး ဆိုးဆိုးရွားရွား မဟုတ်ပေမယ့် အစာစားရင် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုမျိုချလိုက်တာနဲ့ စပ်ပြီးတော့ နာနေရတဲ့ အနာလေးအဖြူလေးတွေ ပေါက်ဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီအနာလေးတွေကို Aphthous Ulcer လို့ခေါ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ Stress Ulcer လို့လည်းခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူက Stress များတဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်တတ်လို့ပါ။ အခု အဲဒီအနာလေးတွေ အကြောင်းနဲ့ ဘယ်လို ကာကွယ် ကုသရမလဲဆိုတာလေး‌တွေကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
အဲ့ဒီအနာလေးတွေက တအားမဆိုးဘူးပေမယ့် ဘယ်လောက် ကသိကအောက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ဖြစ်ဖူးသူတွေမှပဲ ခံစားတတ်မှာပါ။ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းအတွင်းပိုင်းတွေ၊ ပါးစောင်တွေ၊ အာခေါင်တွေ၊ လျာအောက်တွေ စတဲ့ ပါးစပ်အတွင်းက နေရာအစုံမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပါးစပ်ကလွဲပြီး တခြားနေရာတွေမှာတော့ မဖြစ်တတ်ပါဘူး။ အနာရဲ့ပတ်ပတ်လည်လေးတွေက နီနေတတ်ပြီး အနာကတော့ အဖြူရောင်၊ ဒါမှမဟုတ် မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအနာတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလည်းဆိုတာကို အခုချိန်ထိတိုင်အောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိသေးပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေက တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အများကြီးကြောင့်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ ဒီအနာလေးတွေက ကူးစက်တတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
သံဓာတ်၊ ဖောလစ် အက်စစ် ၊ ဗီတာမင်ဘီ ချို့တဲ့ခြင်း
ဆေးလိပ်သောက်နေရာက ရုတ်တရက် ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့သူတွေ
အစားအသောက်နဲ့ မတည့်တဲ့အခါမျိုးတွေ စတဲ့အချိန်တွေမှာ အဖြစ်များတတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
အနာလေးတွေ မပျောက်ခင်စပ်ကြားမှာ အနာကို ပိုးမဝင်အောင် သွားနှင့်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို အထူးဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ ဖလိုရိုက်ဒ်ပါတဲ့ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ တစ်နေ့ အနည်းဆုံး (၂) ကြိမ်ခန့် သွားတိုက်ပေးပါ။ အစားစားပြီးတိုင်း ပလုတ်ကျင်းဆေးရည်ဖြင့် သေသေချာချာပလုတ်ကျင်းပါ။ ဆရာဝန်က လိမ်းဆေးညွန်းထားပါက ဆေးလိမ်းပေးပါ။ ပါးစပ်ထဲမှာ ဆေးလိမ်းရင် အနာရှိတဲ့နေရာကို တခါတည်း အသာအယာပုံပေးလိုက်ရုံပါပဲ ။
ဒီအနာလေးတွေဟာ ပြောပြခဲ့သလို ကင်ဆာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စိုးရိမ်စရာလည်း မရှိပါဘူး။ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အခါ ပုံမှန်အတိုင်း ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပါးစပ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အနာတွေက တစ်လခန့်အထိ အနာတွေမကျက်ဘူးဆိုရင် ဒီအနာတွေဟာ ကင်ဆာအနာလို ဆိုးတဲ့ အနာတွေ၊ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အနာတွေဖြစ်နိုင်တာမို့ ဆေးခန်းမှာ အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပြီး ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Live-Style Read 223 times